Aqri: Magacyada guddiyada doorasho ee ay shaaciyeen Jubaland iyo Puntland - Caasimada Online
Home Warar Aqri: Magacyada guddiyada doorasho ee ay shaaciyeen Jubaland iyo Puntland
Aqri: Magacyada guddiyada doorasho ee ay shaaciyeen Jubaland iyo Puntland
Kismaayo (Caasimada Onine) – Maamullada Jubbaland iyo Puntland ayaa ugu dambeyn soo magacaabay guddiyadooda doorashada ee heer dowlad goboleed ee ku metalaya doorashooyinka ka dhacaya dalka, kuwaas oo muddaba laga sugayey.
Magacaabista labadaan guddi oo ka kooban mid 8 xubnood ayaa ka mid ahaa qodobadii la’isku hayey ee doorashooyinka dalka ee 2021-ka, iyada oo dadaal ay saameysay beesha caalamka, gaar ahaan wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobay, kadib la qanciyey labadaasi maamul, inkastoo weli qodobada qaar ee doorashada la’isku hayo.
Sidoo kale waxaa la filayaa in magacaabista guddiyada Jubbaland iyo Puntland, kadib la’isugu imaan doono shirkii ugu dambeeyey oo xal looga gaarayo khilaafka dalka.
Arrintan ayaa ah mid sahleysa isku soo dhowaashaha Jubbaland, Puntland iyo dowladda federaalka oo si weyn isugu hayey hanaanka loo wajahayo doorashooyinka dalka.
Liiska Guddiyada doorashada Jubbaland iyo Puntland oo kala ah:-